OwnBackup: Famerenana ny voina, famafazana boaty Sandbox, ary angona tahiry ho an'ny Salesforce | Martech Zone
OwnBackup: Famerenana ny voina, famafazana boaty Sandbox, ary angona tahiry ho an'ny Salesforce
Taona maro lasa izay, namindra ny automatisation marketing ho any amina sehatra fanta-daza sy be mpampiasa aho (fa tsy Salesforce). Ny ekipako dia namolavola sy nanangana fanentanana fikolokoloana vitsivitsy ary tena nanomboka nitondra fivezivezena mitarika firy izahay… mandra-pahatongan'ny loza. Ny sehatra dia nanao fanatsarana lehibe ary tsy nahy mamafa ny angon-drakitra marobe, anisan'izany ny anay.
Raha nanana fifanarahana haavo momba ny serivisy ny orinasa (slå) izay nanome antoka fa ho avy dia tsy nisy backup ary fanarenana fahaizana amin'ny ambaratonga kaonty. Nanjavona ny asanay ary tsy nanana loharanom-pahalalana na fahaiza-manao hamerenana azy amin'ny kaontina ny orinasa. Na dia mety nampiharina indray aza ny volavolainay, ny vinaninay sy ny mpanjifantsika rehetra asa voafafa. Mazava ho azy fa tsy nisy fomba namerina an'io tahirin-kevitra manakiana sy sarobidy io. Mino aho fa very an'arivony maro isika, raha tsy vola an-tapitrisany. Ny sehatra dia namoaka anay tamin'ny fifanarahanay ary nandao ahy avy hatrany ny fandaharan'asan'izy ireo.
Nianarako ny lesona nianarako. Anisan'ny fizotran'ny fifidianako mpivarotra izao dia ny fiantohana fa ny sehatra dia manana rafitra fanondranana na backup… na API tena matanjaka azoko atao ny mamerina angon-drakitra matetika. Manoro hevitra ny mpanjifa aho mba hanao toy izany koa.
Ny sehatr'asa dia matetika manana backup sy rindrambaiko feno rindrambaiko natsangana tao anaty sehatra ho fiarovana azy ireo, saingy ireo fitaovana ireo dia tsy mora idiran'ny mpanjifany. Diso ny tompon'ny sehatra CRM fa satria ao anaty rahona ny angon-drakitra SaaS, voaaro izy.
69% amin'ireo orinasa ao anatin'ny tontolo iainana Salesforce no miaiky fa tsy vonona izy ireo amin'ny fatiantoka data na kolikoly.
Ireo orinasa toa ny Salesforce dia miverimberina, manavao ary mampiditra haingana hafainganam-pandeha miaraka amin'ireo mpamorona an-jatony izay tsy azo atao mihitsy ny mamorona sy mitazona codebase mifanindran-dàlana ho an'ny mpanjifa hamerina sy hiantoka ny angon-drakitra. Ny fifantohan'izy ireo dia ny fitoniana eo amin'ny rafitra, ny fotoana iainana, ny filaminana ary ny fanavaozana… noho izany ny orinasa dia tsy maintsy mijery ny vahaolana avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny zavatra toy ny backup.
Zava-dehibe ny manazava fa ny Salesforce tsy antony voalohany mahatonga ny fahaverezan'ny data. Raha ny marina, izaho manokana dia mbola tsy nahita azy ireo nanimba ny angon-drakitra mpanjifa. Nisy fahatapahana data indraindray, saingy tsy mbola nahita loza aho (mandondona amin'ny hazo). Ary koa, Salesforce dia manana fahaiza-manao fanondranana ho an'ny angon-drakitra marobe azo ampiasaina, saingy tsy mety izany satria mitaky fananganana nomaniny ho solon'izay, fandaharam-potoana, tatitra ary fahaiza-manao hafa manodidina azy ho feno vahaolana fanarenana loza.
Inona avy ireo fandrahonana lehibe indrindra amin'ny angon-drakitra orinasa?
Ransomware attacks - Lasibatry ny fanafihana ransomware ny angon-drakitra mitsikera sy mora tohina.
Famafana tsy nahy - Matetika ny lozam-pifamoivoizana na famafana data matetika no sendra mpisera.
Fitsapana ratsy - Mampitombo ny fahafahan'ny fatiantoka angon-drakitra na kolikoly ny workflows sy ny fampiharana.
Hacktivists - Ireo mpanao heloka bevava cyber na politika misy ifandraisany amin'ny politika na politika dia mampiseho na manimba ny angona.
Insiders maloto - Ireo mpiasa ankehitriny, na mpiantoka, na mpiaramiasa manana fidirana ara-dalàna dia mety hanimba raha toa ka miharatsy ny fifandraisana.
Rogue Applications - miaraka amin'ny fifanakalozana matanjaka ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, dia misy foana ny vintana mety hamafana, hanongotra na hanimba ny angon-drakitrao ny sehatra.
Soa ihany, Salesforce's API-voalohany Ny fanatontosana ny fampandrosoana dia manome antoka fa ny endri-javatra na singa data dia azo alaina tanteraka amin'ny alàlan'ny karazana isan-karazany interface tsara amin'ny programa fandaharana (APIs). Manokatra varavarana ho an'ny antoko fahatelo handray ny banga amin'ny fanarenana ny voina… izay OwnBackup nahavita.
Manolotra ireto vahaolana manaraka ireto i OwnBackup:
Salesforce Backup ary fanarenana - Arovy ny angona sy metadata miaraka amina backup feno sy mandeha ho azy ary fanarenana haingana sy tsy misy fihenjanana.
Salesforce Sandbox Seeding - Manaparitaka angona amin'ny boaty fasika ho an'ny fanavaozana haingana sy tontolo iainana fiofanana tsara miaraka amin'ny Seading Sandbox Enhanced.
Salesforce Data Archiving - Tehirizo ny angon-drakitra miaraka amina politika fitahirizana azo namboarina sy fanarahana tsotra kokoa amin'ny OwnBackup Archiver.
Ankehitriny i Cargill mampiasa OwnBackup dia tsy tokony hiasa saina intsony amin'ny famoizana data isika. Raha manana olana isika dia afaka mampitaha haingana sy mamerina amin'ny laoniny ny angon-drakitra rehetra saingy manala ny fihenan'ny data rehetra.
Kim Gandhi, tompona vokatra stratejika momba ny mpanjifa ao amin'ny Cargill FIBI Division
Ny OwnBackup dia manakana anao tsy hanary ny angon-drakitra Salesforce CRM sy metadata miaraka amina backup automatique ary fanarenana haingana, tsy misy fihenjanana… miaraka amin'ny vidiny mora amin'ny mpampiasa.
Manaova fandaharana Demo an'ny OwnBackup
Tags: appexchangehacktivistsolona anatyselfbackupfitsapana tsy mahombyransomwarefampiharana lozisialysalesforcempivarotra appexchangebackups an'ny salesforcetahiry angon-drakitra salesforcefanarenana loza amin'ny varotrafamafazana boaty fitobiana
Lesona nianarana: Sehatra haino aman-jery sosialy sy fananganana adiresy Blockchain